Warka - Sii deynta buuxda ee dib-u-habeynta dib-u-habeynta, xoogga dhammaystiran ayaa si weyn u fiicnaaday
Gudaha shirkadda Tangshan ee korantada korantada korantada, mashiinka aqoon isweydaarsiga ayaa qeylinaya, khadka wax soo saarka ee hawlgalka buuxa. Aqoon isweydaarsiga qoyan, ka hor bartamihii xagaaga, shaqaalaha gacmaha gaagaaban ayaa si caro leh u dhididaya, oo shaqeynaya waqti dheeri ah si ay amarro u soo saaraan. Bakhaarka dibadiisa, isku xidhka alaab-keenista ayaa mashquul badan oo nidaamsan. Maaddaama astaanta BBMG lagu arki karo meel kasta oo ka mid ah warshadda, dhaqanka BBMG oo leh dhaqan shaqeeyn maadaama xudunta lagu dhex daray qalbiga shaqaale kasta.
Waqtigaas, BBMG waxay badbaadisay shirkadda koronto-dhaliyaha korantada dhalisa ee korantada sare qarka u saaran inay kacdo. Afartii sano ee la soo dhaafay ee dib-u-habeynta, BBMG waxay siisay shirkadaha korantada korantada dhaliya korantada korantada sare taageero weyn marka la eego maalgelinta, dhismaha kooxda hibada, iyo xalinta dhibaatooyinka ka haray taariikhda, taasoo ka dhigeysa shirkadaha insulin-ta korantada korantada korantada koronto ku shaqeeya si fudud loo geliyay dagaal, ogaanshaha leexasho qurux badan oo ka timid musalafnimada iyo faa'iidada.
Sumcadda wanaagsan ee BBMG Group, saamaynta sumadaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah iyo awoodda dhammaystiran ee boqollaal bilyan oo dakhli ah ayaa ka dhigtay shirkadda korantada korantada aaladda korantada korontada dhalisa ee ka tirsan qoyska ballaaran ee BBMG Group inay dib u helaan macaamiishooda ka dib lix sano oo ay aamusnaayeen suuqa tooska ah insulators galaas. Kalsoonida shirkadda waxaa si gaar ah u aqoonsan suuqa gobolka ee 'Grid market' oo leh caqabado badan oo gelitaan iyo shuruudaha sare ee sumcadda shirkadaha iyo tayada wax soo saarka. Bishii Febraayo 2018, shirkadda koronto-dhaliyaha korantada koronto-dhaliyaha korantada sare ayaa ku guuleysatay dalab loogu talagalay Mashruuca 'Grid Direct Recruiting Zhangbei Flexible DC Project', oo ah mashruucii ugu horreeyay ee mudaaharaadka muhiimka ah ee gudaha. Wareegga 'Grid Pass' wuxuu matalayaa danab sare koronto koronto galaaska shirkadda mowqifka ay ka taagan tahay warshadaha galaaska toosan ayaa la hagaajiyay. 2022 Mashruuca Jiilaalka Olombikada ee jilicsan ee DC, isticmaalka shirkadaha koronto-dhaliyeyaasha korantada ku shaqeeya ee korantada sare ka shaqeeya ayaa lagu qiyaasay 50%. Tan iyo markii la aasaasay warshad koronto-dhaliyaha korantada koronto ku shaqeeya, Grid-ka Gobolku wuxuu ku guuleystay dalab cusub oo sare. Roobka gobolka wuxuu kaalinta koowaad ka galay warshadaha, dakhliga iibkuna wuxuu kordhay 102% sanadkii. Shirkadda insilinka korantada ee 'Porcelain insulator' waxay dib u bilawday suuqii insulatorka dhoobada dhoobada oo sanado badan hakad galay, dakhliga iibkiisuna wuxuu kordhay 70% sanadkii. Laga soo bilaabo Oktoobar 2019, shirkadda korantada korantada koronto-dhaliyaha korantada sare waxay si buuxda dib ugu soo celisay dhammaan macaamiisha saddexda suuq ee waaweyn ee suuqyada shabakadda, suuqa kala-beddelka, iyo suuqa shisheeye.
Shirkadda dib-u-habeynta korantada korantada korantada ku shaqeeya, si loo hagaajiyo tayada howlaha loona hagaajiyo tartanka suuqa, dadaallada maaraynta ee xoojinta yareynta kharashyada iyo kordhinta waxtarka. In hal-abuurnimada naqshadeynta geeddi-socodka, la kordhiyo heerka isticmaalka foornada, soo gaabin waqtiga shaqada oo la yareeyo isticmaalka gaaska; horumarinta qalabka birta, ku beddel birta aan birta ahayn aluminium si loo yareeyo kharashka soo iibsiga. Waqtigan xaadirka ah, 3 milyan ee tooska ah ee loo yaqaan 'porcelains' ee suuqa la geliyay dhammaantood waa kuwo ammaan ah oo loola socdo shilal eber ah Waqtigan xaadirka ah, awoodda wax soo saarka ee shirkadda koronto-dhaliyaha korantada korantada sare ku jirta ayaa ku jirta kaalinta labaad ee dalka, habka wax soo saarku wuxuu ku jiraa heerka ugu sarreeya ee warshadaha, tayada wax soo saarku waxay ku jirtaa saddexda ugu sareysa dalka, iyo tartanka suuqa iyo sumadda. Saameynta ayaa sii kordheysa